Izifundo ezi-7 ezifundiweyo ekuKhuthazeni ukuBhala kwakho | Martech Zone
NgeCawa, ngoSeptemba 25, 2011 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Kwakumnandi ukubhukisha uJo-Anne Vandermeulen kwi Itekhnoloji yeNtengiso yebhlog yerediyo kodwa malunga nemizuzu engama-20, ukufikelela kwethu kwi-Intanethi kwehla kwaye kwafuneka siyeke umboniso. Kwakudanisa kuba sasifumana ingcebiso enkulu kuJo-Anne.
UJo-Anne yingcali yokwazisa ngokuzipapasha. Emva kokuthatha umhlala-phantsi njengotitshala, ubhale uthotho lweencwadi… kwaye kwinkqubo wafunda indlela yokuphucula ukukhutshwa kweempapasho zakhe. Ngoku uzinikele kwishishini lakhe, yena blog, nganye podcast, kunye nencwadi yakhe entsha yokunceda ababhali bakhuthaze ukubhala kwabo.
Ndinqwenela ukuba ndadibana noJo-Anne kwiminyaka embalwa eyadlulayo… phambi kokuba ndibhale Ukubhengezwa kweNkampani yeDummies. Ayisiyo ukuba incwadi ayithengisi ngokungaguquguqukiyo- yinto yokuba andikholelwa ukuba ndenze konke endinokukwenza xa ndifuna ukukhuthaza incwadi. Kunye negalelo likaJo-Anne, ndibeke olu luhlu lwezifundo kunye.
Nokuba uyazipapasha, uhamba kwifemu encinci yokupapasha, okanye ushicilelo lwesiNtu… Uya kuba noxanduva lokuzithengisa kunye neencwadi zakho. Uyakwazi ukwenza oku ngokwakho, nokuba awunaso isidanga sentengiso okanye unqwenela ukufuna umthengisi oqeqeshiweyo, KODWA kuyakuthatha ixesha kunye namandla- kunye nolwazi.
Ukuqalisa ibhlog iyimfuneko. Ziveze ngokuchanekileyo njengengcali, zibonelele ngomxholo obalulekileyo ababukeli bakho abanokuzithatha, kwaye banike kwaye banike ezinye. Qiniseka, wamkele unxibelelwano nabaphulaphuli bakho. Kwaye-ungalibali ukubeka umnxeba kwisenzo kwibar esecaleni kwincwadi (s) yakho ngeqhosha lokuthenga elicacileyo kunye nokusebenza kwamakhonkco!
Ukuba nobukho kwimidiya yoluntu yipompo exabisekileyo yokufumana ukuvezwa KAKHULU (sithetha amalungu ayi-1.2 Billion kuFacebook kuphela ngonyaka ka-2012. Yinto eninzi kakhulu leyo oya kuthi uphuphe ngayo xa unxibelelana nokusayinwa kwencwadi). Ukujolisa kubaphulaphuli bakho, ukulungele ukuzenza (kunye neencwadi zakho) zibonakale kuthungelwano oluninzi kangangoko kunokwenzeka, kwaye uchithe ixesha usenza ubudlelwane obuza kuthi ekugqibeleni buvulele umnyango kumathuba amaninzi.
Ukunyuselwa kwencwadi yakho kuqala kumhla apho unoluvo lwencwadi! Ukwakha ulindelo kunye nabaphulaphuli bakho kubalulekile. Baninzi abantu (kubandakanya nathi) linda de incwadi iye kuprinta ngaphambi kokuba bayikhuthaze. Silahlekelwe lixesha elininzi kunye nomfutho kule! Ndinqwenela ukuba ngesityhale ii-odolo zangaphambili kwaye sayifumana indawo ngokukhawuleza.
Njengesithethi, ezinye izithethi endikunye nazo zikhuthaze ukuthengiswa kweencwadi kwaye zasasaza iincwadi ezininzi nge ukucela iincwadi zokuthengwa komsitho kwabo bezayo endaweni yokuhlawula umrhumo wokuthetha. Lo ngumbono omkhulu kuba usebenza kumanqanaba ama-3… ukunxulumana nencwadi, ukuthengisa ezinye iincwadi, kunye nokuba nabaphulaphuli babafundi abaphumayo bayathetha ngencwadi leyo. Yimpumelelo, iphumelele, iphumelele!
Ukuphonononga into! Thumela iikopi zencwadi kwabanye abasemagunyeni kwishishini lakho kwaye Cela ingxelo yabo ethembekileyo kunye nokuphononongwa kwiAmazon nakwezinye iindawo zokuphonononga iincwadi. Abasemagunyeni abaneeblogi bahlala bebhala iiposti zebhlogi malunga nencwadi yakho kwaye bancede ukuyazisa.
Khuthaza abafundi bakho! Kwincwadi yethu, besinayo iividiyo yonke indlela evela eMzantsi Afrika ixhomekeke ku ifoto evela kwi-Blogger eyiNtloko ye-eBay, URichard Brewer-Hay, kwiveki ephelile! Abafundi bakho bafuna ukunxibelelana nawe njengombhali- ke qiniseka ukuba usebenzisa ithuba kwaye wakhe olo lwalamano xa kuvela amathuba!
Qiniseka ukuba uyayithatha ikopi yencwadi entsha kaJo-Anne, iiNgcebiso zeNkulumbuso yeNkulumbuso yaBabhali.
UkuSebenza koKhangelo lwaseKhaya akuThinteli ubuGcisa boLuntu okanye beLizwe
Sep 25, 2011 ngo-10:28 PM
Inani leSihlanu liyavakala kum - enkosi. Bendingasoze ndiyicinge ndodwa.